merocinema.com | Article
विदेशी बजारमा ध्यान दिऔं
कम्तीमा संसारभरि छरिएका नेपाली भाषीहरुसम्म मात्रै भए पनि सिनेमा पहुँच पुर्‍याउनु पर्छ । यसका लागि गतिलो उत्पादन, गतिलो प्रवर्द्धन र गतिलो प्रदर्शन एकमात्र सूत्र हो ।
मान्छेको मन र सिनेमा - अनुप बराल
असल निर्देशकले राम्रो स्क्रिप्ट पायो भने उत्कृष्ट फिल्म बनाउन सक्छ, त्यही आलेखलाई औसत निर्देशकले कामचलाउ फिल्म बनाउन सक्छ तर झुर स्क्रिप्ट लिएर एउटा राम्रो निर्देशकले सम्भवत: गतिलो फिल्म कहिल्यै बनाउन सक्दैन ।
नेपाली सिनेमाका अनुत्तरित प्रश्नहरु
पहिले तरिकाले देशमा सिनेमा चलाउनूस अनि बल्ल भन्नूस- बिदेश । बाहिर दुई सोज चलाएर गफ दिन छोडौँ । बरु नेपालकै दर्शकलाई केही हदसम्म भएपनि हलसम्म तान्नेबारे सोच्नूस ।
मेरो मनमा 'जेरी' - आना शर्मा
नेपाली मुभीको ग्रेड डेभलप हुने खालको स्क्रिप्ट, टिम भयो भनेचाहिँ फिल्म गर्छु । उनीहरूको थट चेन्ज गर्ने खालका फिल्म भए भनेचाहिँ गर्छु । नेपाली फिल्म पनि यत्तिको स्टयान्डर्ड बन्न सक्छ भनेर देखाउने चान्स पाए म छोडदिनँ ।
१२५ फिल्म हेर्न सिफारिस
दिमाग खराब गरेर केही पनि उपलब्धि नहुने फिल्ममा धेरै समय र पैसा लगानी गर्नुको खासै अर्थ छैन । तर, कसैलाई फिल्म अध्ययन गर्नु छ वा यसमा स्वाद र शैलीको विविधता बारे जान्नु छ भने यो घेरो तोड्नैपर्छ ।
यसकारण कलिउड हैन नेपाली चलचित्र उद्योग
राष्ट्रिय चलचित्र नीति बन्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली चलचित्र उद्योगको नाम राख्ने कि नराख्ने ? राख्ने भए त्यसको आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकता के हो ? त्यसका बारेमा स्वस्थ वहस गर्ने सही बेला हो यो ।
सुकुलमा बसेर ब्लु फिल्म हेर्दा
३७ बर्ष अघि ,जीवनमा पहिलो चोटी 'ब्लु फिल्म' हेर्न हेर्न म डराइ डराइ हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालय नजिकै रहेको घरमा पसेका थिए ।
अबिच्युरी | हिरोको बिदाइ
श्रीकृष्णको अन्तिम यात्रामा जति मानिस स्वतस्फूर्त सामेल भए, त्यो कुनै जोक थिएन ।